Saamaynta 'coriolis' Waa maxay, sidee u shaqeysaa iyo muhiimada ay leedahay | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | | Ciencia
El saamaynta coriolis Waxaa si ballaaran loogu magacaabay sayniska inay tixraacdo leex leexadka ay qulqulka biyaha iyo hawadu ku leeyihiin meelo kala duwan. Waxaa la yidhi duufaanno duufaannadu waxay ku wareegaan hal dhinac dhinaca woqooyi iyo dhinaca kale ee koonfurta. Waa maxay sababta tan? Sidoo kale waa isku mid meelaha jirka ee biyaha iyo xitaa xaqiiqda caanka ah ee ka soo horjeedka leexashada biyaha musqusha ee meelo kala duwan. Waxaas oo dhan waxaa shuruud u ah saameynta coriolis.
Ma dooneysaa inaad waxbadan ka ogaato saameynta coriolis? Halkan waxaan ku sharaxeynaa wax walboo adiga.
1 Waa maxay saameynta coriolis?
2 Saamaynta Coriolis ee saadaasha hawada iyo badaha
3 Maxay duufaannadu ugu leexdaan dhinaca ka soo horjeedka?
4 LOOGU TALAGALAY
Waa maxay saameynta coriolis?
Soo-saareha mas'uulka ka ahaa xisaabinta qeexida ciidankan wuxuu ahaa Gaspard-Gustave Coriolis. Waa ku mahadsan tahay tan ay ku heshay magacan oo aan mid kale u helin. Waxaa la helay 1935 waxayna ka caawisay in wax badan laga ogaado meeraha iyo caalamka. Dhaqdhaqaaq kasta oo wareega ah waxaa jira xoog coriolis ah.
Saameyntani waa mid fudud in la sharaxo. Waa awood dhacda sababo la xiriira wareegga uu dhulku ku haysto dhidibkiisa. Wareegtadan ayaa ah waxa inaga dhigaya habeen iyo maalin. Wareeggan dartiis, raadadka walxaha ee dhaqdhaqaaqa dhulka dushiisa ayaa leexsan. Way iska cadahay haddii aan ku qabanno wax si dhaqso ah u wareegaya. Dhulkuna sidoo kale. Si kastaba ha noqotee, awoodda cuf isjiidadka awgood, ma ogaanayno in Dhulku si isdaba joog ah u wareegayo oo uusan istaagin.
Joogitaanka walxaha ayaa u leexanaya dhanka midig ee wax kasta oo ka mid ah cirifka woqooyi iyo dhanka bidix ee wax kasta oo ka mid ah koonfuurta koonfureed. Tani waa sababta ay duufaannada iyo duufaannadu ugu kala socdaan jihooyin kala duwan maaddaama ay ku yaalliin hal cirif ama mid kale.
Markay saamayntani dhacdo, xawaaraha qaraabada jidhku waxay dhacdaa oo u dhiganta xawaaraha qaraabada uu hadda wado. Sidaas darteed, Waxay kuxirantahay xawaaraha uu sheygu kudhaqaaqayo, saameynta coriolis wey sii xoog badnaan doontaa ama maya.
Saamaynta Coriolis ee saadaasha hawada iyo badaha
Awoodda coriolis waxaa lagu sharraxay waraaqihii ugu horreeyay ee saynis kadib markii la ogaaday inay yihiin xoog xoog ku kala wareega. Awoodaani waa tan jirka ku jirta marka loo eego nidaamka tixraaca iyo wareega. Tani waa waxa ku dhaca Dunida. Si aan si fiican u fahamno, waxay la mid tahay sida marmar marmar la gelinayo marsho socota. Raadkeeda ayaa wax laga beddeli doonaa iyadoo kuxiran xawaaraha marmarka, maxaa yeelay waxaan u qaadaneynaa in xawaaraha uu qalabka ku wareego uu yahay mid joogto ah. Tani waxay ku dhacdaa xawaaraha wareegga dhulka, waa joogto.
Sababtaas awgeed, leexashada iyo ku dhawaaqitaankeeda dhabbaha walxaha dhulka dushiisa waxaa lagu xirayaa xawaaraha. Waxaan falanqeyn doonnaa muhiimada ay leedahay saameyntan oo ku saabsan cilmiga saadaasha hawada iyo badda.
Markay tiro hawadeed ama biyo socdaan, waxay raacaan meerisyada dhulka. Xawaareheeda, sidaas darteed, waxaa wax looga beddelay sidoo kale dhabba-galkiisa ficilka saameynta coriolis.
Saameyntani waxay naga caawineysaa inaan ogaano in markasta oo uu jiro dhaqdhaqaaq wareeg ah, wareegyadu ay raaci doonaan qaabka lagu sharaxay. Tani waxay ku dhacdaa duufaanno iyo anticyclones meeraha kasta oo ma aha oo kaliya on Earth. Sidoo kale, xoogga coriolis wuxuu ku dhacaa wareegga qorraxda iyo xiddigaha sidoo kale.
Saameyntani waxay ku dhacdaa hab aad u xoog badan oo ku yaal bartamaha maaddaama ay tahay aagga uu xawaaraha dusha sare ku weyn yahay. Baararka waa ka gaabiyaa. Sababtuna waxay tahay dhulbaraha, masaafada udhaxeysa bartamaha Dhulka ayaa ka weyn.
Maxay duufaannadu ugu leexdaan dhinaca ka soo horjeedka?
Dooxooyinka leh qaab aad u habboon, sida Dooxada Waqooyiga Atlaantikada iyo Koonfurta, saameynta waxay leexisaa qulqulka badda. Qeybta woqooyi waxay u leexisaa dhinaca midig iyo koonfurta dhinaceeda bidix. Sidoo kale waa run marka laga hadlayo dabaylaha.
Sida for wararka xanta ah ee ku faafida musqusha ee Australiya gabi ahaanba waa been. Uma wareegaan jihada ka soo horjeedka sida ay adduunka kale ugu wareegaan saamayntaas awgeed. Haddii taasi dhacdo, waa sababta oo ah soosaarayaasha ayaa u dhisa si ay sidaas ugu rogaan.
Dhinaca kale, kuwa ku rogaa dhinaca ka soo horjeedka sababtoo ah saameynta coriolis waa duufaanno. Duufaanadani waxay cabiraan kiiloomitir fara badan waxaana dhici karta inay dhacdo in darafyadooda ay kujiraan meelo kaladuwan. Markay taasi dhacdo, waxay u wareegi doonaan jihada ka soo horjeedda dhinac walba, maxaa yeelay dhammaad kasta wuxuu yeelan doonaa xawaare ka duwan sida ay Isu rogto. Sidaa darteed, duufaannadu waxay ku dambeeyaan kala wareegga.
Xaaladaha galaxies, cuf isjiidadka ayaa u sababa in bartamaha galaxyadu ku dhexjiraan god madow oo aad u weyn oo wareegaya isla markaana soo jiita dhammaan arrimaha ku xeeran. Si kastaba ha noqotee, cuf isjiidadka ayaa daciifa marka aan ka dhaqaaqno xarunta galaxies-ka. Tani waxay gaabinaysaa maaddada waxayna abuureysaa saameyn wareeg ah. Ha iloobin in xarunta galaxies ay sameysay a god madow.
Inkasta oo qaarkood aysan ahayn wax qaboojin ah, xoogga coriolis waa wax aad muhiim u ah. Waxay ku dhacdaa ifafaaleyaal badan oo Dunida saaran waxayna mas'uul ka tahay dhaqdhaqaaqa hawada iyo badda. Tani waa shay muhiim ah oo laga fiirsado marka la qorsheynayo jidadka hawada ee duulimaadyada ganacsiga.
Aqoontaas awgeed, waxaa suurtagal noqotay in waxbadan laga fahmo dhaqdhaqaaqa Galaxies, socodka hawada iyo socodka biyaha. Saadaasha hawada waxaa looga bartay saadaasha dhacdooyinkaas saadaasha hawada.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka ogaato waxa ku saabsan saamaynta coriolis
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Saamaynta Coriolis